Madaxweyne Xasan sheikh Oo iclaamiyey in joogta laga dhigayo mushaarka iyo daryeelka Meleteriga – Radio Daljir
Luulyo 21, 2013 3:35 b 0
Muqdisho, July 21- 2013 – Madaxweynaha Jamhuuryada Soomaaliya mudane Xasan sheikh Maxamuud ayaa kulan kula qaatay muqdisho, koox saraakiil ah oo ka tirsan kuwa ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in is bedel lagu sameyn doono nidaamka meleteriga.
Wuxuu sheegay madaxweyne Xasan sheikh oo ka hadlayey is bedelka ciidanka ay la damacsan yihiin in dowlada Federaalka ah ay dadaal u gelayso in la xoojiyo awooda iyo kala dambeynta ciidanka, si loo helo awood meleteri oo buuxda oo dalku yeesho.
Mudane Xasan sheikh wuxuu sheegay in awooda keli ah ee dalka wax looga bedeli karaa ay tahay ciidanka qalabka sida, kuwaasi oo loo adeegsan karo ka hortaga sharci diidka, iyo meel marinta sharciga, wuxuu intaas kadib ku dhawaaqay in ciidanka ay siin doonaan muhiimada koowaad.
? Hadba inta ay le?egtahay awooda ciidanka qalabka sida ee dalka ayey la mid tahay awooda Dowladnimo ee dalkaas ka jirta, waa wax caadi ah oo la wada ogyahay aduunka oo dhan, mar kasta waxaan muhiimada siin doonaan ciidamada qalabka sida? ayuu yiri Madaxweyne Xasan oo kulanka ka hadlayey.
Docda kale Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu iclaamiyey in dowlada federaalka ah ay hadda kadib ku dadaali doonto bixinta mushaarka iyo adeega ciidanka, sidoo kale wuxuu sheegay in mar kasta ay madaxda sare ee dalka ka war heyn doonaan daryeelka ciidanka.
Ugu dambeyntii Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud wuxuu ka dalbaday ciidamada qalabka sida ee dalka ilaalinta asluubta, wuxuu sheegay in awooda ciidanka ay ku xiran tahay sida ay u dhaqmaan, wuxuu ka dalbaday in ay noqdaan kuwo isku xiran oo kala dambeyn leh.
Howgal amni sugid ah Oo socon doona muddo Toddobaad ah oo ka bilowday degmada Caabudwaaq